“Bishaan Haramaayaa jireenya keenya ture amma garuu rakkina keessa galle” - BBC News Afaan Oromoo
“Bishaan Haramaayaa jireenya keenya ture amma garuu rakkina keessa galle”
6 Sadaasa 2017
Madda suuraa, HARAMAYA UNIVERSITY RESEARCH PAPER
Haramaayaa baroota 1980 hanga 2016tti
Waggootaaf naannoo harichaa kan jiraataniifi yeroo gaarii Haramaayaa irra bidiruun deemanii qurxummii kiyyeessaa fi kuduraa omishaa jiraachuu isaanii kan yaadatan Obbo Badrii Yuusuf, "amma jiruun rakkistuu taate" jechuun dubbatu.
Kuduraawwan gosa garaagaraa fi jimaan baay'inaan omishamee mana Obbo Badrii seenuu erga dhiisees waggootni lakka'amaniiru.
Kana bira darbee gogiinsi Haramaayaa loon obbo Badrii dheebuu bishaaniin miidhamuu fi eela seenanii jalaa du'uu eegalan.
Amma hedduumminni lubbuu qabeeyyii Haramaayaan utubaa jireenyaa ta'eefii jiraachaa turan badaniiru, galiin daawwattoota Jabuutii irraallee dhufanii haricha daawwatan irraa argamus hin jiru.
Ijoollummaa hanga dargaggummaa naannoo Haramaayaatti kan jiraate dargaggoo Najaash Wardii magaalaa Haramaayaa Araddaa 01 keessatti itti aanaa bulchaa araddaa ta'uun hojjeta.
Dargaggoo Najaash "harri kun faaya magaalaa Haramaayaa ture. Jiraattota naannoo kanaafis qabeenya guddaa ture. Qonnaan bultootni omisha lubbuu isaanii bira darbu omishaa hin jiran. Kanaafuu haala yaaddessaa keessa jirra" jechuun hima.
Harka namaa fi Jijjiirama qilleensaa
Magaalli Harar uummatashee kuma dhibbaan lakka'amu bishaan sulula Haramaayaa obaasaa turte, bishaan dhugaatii magaalattii ammallee lafuma hara kana keessaa baha.
Magaalawwan Haramaayaa fi Awadaayis bishaan dhugaatii jiraatota isaaniif ta'u sulula Haramaayaa keessaa argatu.
Paampiwwan bishaanii kuma kudhan ta'anis bishaan harichaa xuuxxuun oyruu qonnaan bultootaarra yaassaa turaniiru.
Yunivarsiitii Haramaayaatti qindeessaa teknika misooma qindaa'aa sulula hara Haramaayaa kan ta'an Obbo Tafarii Taaddasaa "seerri itti fayyadama bishaanii dhabamuunsaa bishaan hanga sululli sun kennuu danda'uu ol faayidaarra akka oolu tasasise. Haramaayaa irrattis badii guddaa geesise, bajatni bishaaniis negatiiva seene" jedhan.
Haa ta'u malee Haramaayaa akka durii bishaaniin osoo hin taanee dhukkeen irra ciisaa jiru deebisanii misoomsuuf qaamoleen akkaattaa itti fayyadamaa turaniifi jiraniin qoodasaanii hin bahanne heddu dha.
Haramaayaan akka deebi'uuf lafa hektaara 15,000 irratti hojiin misooma sululaa hojjetamuu qabus kan hojjetamaa jiru baay'ee xiqqaa dha.
Gaarreen sadi irratti hojjechaa kan jiru yunivarsiittin Haramaayaa "maallaqa dhabuun koo Haramaayaa deebisee misoomsuuf qormaata natti ta'e" jedha.
Gama biraatin boolawwan bishaanii heddu qotuun bishaan kan argatan magaalli Harar fi warshaan biiraa Harar akkasumas magaalli Awadaay bishaan qusannaa malee itti fayyadamaa jiraniif misooma harichaaf gumaachaa akka hin jirre bulchiinsa magaala Haramaayaa fi yunivarsiitti Harmaayaa irraa dhageenye.
Miidhaa gogiinsi Haramaayaa hawaasa naannoo irratti qaqqabsiiseef qorannoowwan yunivarsiitiin Haramaayaa taasiseen cinatti waggoota 28'f naannoo harichaatti kan jiraatan adde Faaxee Abdulaahii ragaa bahu.
"Waggoota 13 as rakkoo hedduutu nu daawwate, erga harichi gogee dinnichis ta'ee jimaan nu jalaa gubachuu eegalan. Kanaanis baay'ee miidhamne" jechuun dhiibbaa gogiinsi Haramaayaa jireenya isaanii fi maatii isaanii irratti qaqqabsiise adde Faaxeen dubbatu.
Maatiin kuduraaf jimaa baay'inaan omishee gurguruun galii argachaa ture amma of danda'uun itti ulfaachaa jira.
Bulchaan aanaa Haramaayaa obbo Abdii Ahimad "rakkoon hanqina bishaan dhugaatii qonnaan bultootaa kun akka furamuuf warshaan biiraa Harar akkuma bishaan ofiif baasee fayyadamaa jiru qonnaan bultoota kanaafis bishaan jallisii fi dhugaatii akka baasuuf sadarkaa mariitti waliigalleera" jechuun BBC'ti himan.
Yunivarsiitii Haramaayaatti qindeessaa teknikaa misooma qindaa'aa sulula hara Haramaayaa kan ta'an Obbo Tafarii Taaddasaas "warshaan biiraa Harar haala amma jiruun bishaanicha itti fayyadamuu itti fufuu qaba jennee hin yaadnu kaffalttii tajaajila naannoos kaffaluu qaba" jedhan.
Haa ta'u malee qaamoleen federaalaa harka akka itti hin hiixanne kan himan bulchaan aanaa Haramaayaa Obbo Abdii Ahimad bishaan Haramaayaa guyyaa tokko akka deebi'u abdii qabu.
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaatiin kan himatame Xilaahun Yaamii hidhaa umurii guutuun adabame
3 Hagayya 2021
Mootummaan haaldureewwan TPLF dhiyeesse irratti maal jedhe?
Namoonni nagaan magaalaa hidhattoonni to’atan keessa akka baqatan gaafataman
Atileetii Jaappaanirraa biyyasheetti deebi'uu diddeef viizaan kenname
‘Kuni dhuguma mucaa keetii jettanii na hin gaafatiinaa’
Laga Itoophiyaafi Sudaan daangessu keessatti reeffi namoota du'anii argame
''Buna malee shaampiyoonaa tahuu hin danda'u'' - Siifan Hasan
'Nyaanni foolii akkamii akka qabu hin beeku'
Yeroo dhuma kan haaromfame: 30 Amajjii 2020